UNvidia Optimus kukhompyutha yakho ephathekayo yeLinux ngokufaka iBumblebee | Kusuka kuLinux
UNvidia Optimus kukhompyutha yakho ephathekayo yeLinux efaka iBumblebee
eMoscow | | I-GNU / Linux, Izaziso, Kunconyiwe, Amanethiwekhi / Amaseva
Yini iNvidia Optimus?
Lobu buchwepheshe abubusha, kungashiwo nje ukuthi kuthuthukiswa iHybrid SLI ne "Hybrid Graphics" endala, eyavumela ukuphathwa kwamandla lapho uhlanganisa iNvidia GPU nebhodi elinoNvidia Chipset kudeskithophu, manje i-Optimus isivumela ukuthi siyenze okufanayo kuma-laptops ethu anama-processor we-Intel Sandy Brigde (i3, i5, kanye ne-i7) kanye noNvidia Gpu. Ngamazwi alulaLobu buchwepheshe bukuvumela ukuthi ushintshe phakathi kwehluzo ezihlukanisiwe nezinikezelwe ngokuya ngesidingo, okusho ukuthi, uma siqhuba igeyimu yevidiyo, uhlelo luzisebenzela ngokuzenzakalelayo imidwebo ezinikele, esikhundleni salokho uma sibuka ibhayisikobho, izosebenzisa imidwebo ehlukile. Futhi ngamagama anzima kakhudlwana:
“Ngokungafani nezizukulwane zangaphambilini zama-laptops, amakhadi emidwebo yesimanjemanje axhunywe yisiteshi sehadiwe ku-IGP yama-processor we-Intel ngakho-ke ayikho indlela yokukhubaza imidwebo ye-processor ukusebenzisa nje ikhadi lemifanekiso elizinikele. Iprosesa isebenza njengesiteshi sokudlula, lapho ikhadi lehluzo elizinikele likwimodi yokulala, i-chipset yemidwebo isetshenziselwa ukunikeza imidwebo, idlulisa imininingwane kusiqaphi sangaphakathi ngesixhumi se-LVDS se-laptop. Kodwa-ke, uma kusetshenziswa ikhadi lehluzo elizinikele, imininingwane kufanele futhi idlule kwi-chipset yemifanekiso ukuze ifinyelele kumqapha, ngenxa yalesi sizathu akunakwenzeka ukuthi kusebenze iprosesa IGP ngokomzimba ngakho-ke yonke le nqubo yokwenza kusebenze nokwenza kungasebenzi kufanele yenziwe nge-software, kulokhu isilawuli. » (I-Leanuxeros.com)
Ku-Windows lokhu kusebenza kahle (ngingasho okuhle, kepha siyazi ukuthi akukho lutho olusebenza kahle ngamawindi) naku- LinuxNgokushintsha, akukho ukusekelwa okusemthethweni okuvela kuNvidia futhi ngokusho kwezindaba engikwazile ukuzifunda abananhloso yokwenza kanjalo esikhathini esifushane noma esimaphakathi, kulokho kungezwa ukuthi kumakhompiyutha amaningi ayikho inketho yokwenza kusebenze / khubaza elinye lamagrafu usebenzisa i- I-Bios, okusishiya sinesimo esidumaza kakhulu ngoba esimweni lapho kuphela i- Kuhlanganiswe utshalomali ku I-GPU enikezelwe iya emgqonyeni kadoti, esikhundleni salokho uma unayo Izithombe zeNvidia ukusebenza (lokhu kuyinto ejwayelekile) ukusebenza kwamandla kuzosenza sikhumbule iMatrix futhi sibukeke kahle emcabangweni wokuguqula isihlobo noma umakhelwane ibhethri, ngoba, njengoba sonke sazi, kusuka I-Kernel 2.6.38 Amabhethri aphathekayo ayanqanyulwa futhi ukuzimela sekuyigama eliwusizo lokwenza izingoma zokubhikisha (kimi ibhethri lahlala amahora amabili ubude)
Kungakho ohlangothini lweLinux lamandla, sekuvele amaphrojekthi wokuxhasa lobu buchwepheshe kepha ngaphandle kwempumelelo enkulu, kuze kube yilokho Bumblebee. Bumblebee iyithuluzi lomthombo ovulekile elibhalwe ngolimi lwe-C, lisivumela ukuthi sisebenzise umshayeli ophethe i-Nvidia noma inguqulo yamahhala new, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule i-3.0 version yethulwe okuthe phakathi kokunye okusha okusivumela ukuthi sisebenzise ngokuzenzakalela imenenja yamandla ngokwenza kusebenze noma kungasebenzi i-GPU ezinikele ngokuya ngezidingo zecala (okuyilokho okubalulekile kithi).
Singafaka iBumblebee kufayela lomthombo elitholakala ku- https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/downloads
Kunamaphakeji ezinqolobaneni ze- Ubuntu, I-Gentoo, Arch y Debian.
Ngafaka lolu hlelo lokusebenza kuma-distros amabili engiwasebenzisayo: Debian y Arch ngokulandela izinkomba zama-Wikis abo.
Siyafaka Bumblebee kusukela I-AUR
Futhi siyafaka bbswitch ukwazi ukuphatha umphathi wamandla
Uma uzohlala abashayeli new kufanele ufake amaphakheji alandelayo:
Uma usebenzisa abashayeli beNvidia abaphethe, sifaka lawa maphakeji avela ku-AUR.
Sengeza umsebenzisi wethu eqenjini Inyosi enkulu enkulu:
Sivivinya ukuthi konke kufakwe kahle futhi kusebenza ngokuqhuma i-bumblebee ngesandla:
Nemilingo… iNvidia GPU ayisebenzi futhi sisele naleyo edidiyelwe, ngenhlanhla sinika ibhethri lethu ikhefu.
Ngokulandelayo sihlela /etc/rc.conf
Sengeza Bumblebee ku AmaDemoni
Siyabona ukuthi okuhlanganisiwe kuyasebenza futhi ekugcineni kwenqubo kuyacisha ukunikela kokuzinikele, uma ufuna ukwenza uhlelo lokusebenza neNvidia GPU siyenza kusuka kukhonsoli
Ukubona uhlu lwezinketho:
Ukuze ikhadi elizinikele livule / livule ngokuzenzakalela sengeza I-Bbswitch esigabeni samaModyuli:
Siyahlela /etc/bumblebee/bumblebee.conf futhi sengeza umugqa olandelayo esigabeni sabashayeli:
Siyakuqinisekisa lokho PMMethod lokhu emotweni:
Siqala kabusha i- bumblebee:
Ukufaka ku-Debian (Kuphela Ukuhlolwa noma i-Sid)
Okokuqala kufanele ususe noma yikuphi ukufakwa kwangaphambilini kwe-Bumblebee, lapho-ke sinika amandla amakhosombe non-mahhala.
Ukuqalisa izinhlelo zokusebenza ezingama-32 kumasistimu angama-64 kunconywa ukufaka amaphakheji alandelayo:
Sifaka lawa makhosombe ku /etc/apt/sources.list
Ngemuva kwalokho sehlisa ukhiye bese siyengeza:
Sengeza umsebenzisi wethu eqenjini le-Bumblebee:
Siqala kabusha futhi sihlole ukuthi isebenza no:
Uma sifuna ukusebenzisa uhlelo nge-GPU ezinikele, sikwenza ngokulandelayo esigungwini
Ukuqedela ngingakutshela ukuthi ulwazi lwami ngalolu hlelo lokusebenza lube luhle impela, abanye abangane abavela KusukaLinux bangibonile ngidela ekhanda ngizama ngingaphumeleli ukufaka abashayeli beNvidia abaphethe kuma-distros engiwasebenzisayo (iDebian ne-Arch), ngaze ngazithela eBumblebee, ngakolunye uhlangothi, ibhethri elihlala amahora amabili laya isilinganiso amahora amathathu nesigamu futhi izinga lokushisa le-laptop lehle lisuka ku-54 ° laya ku-45 °.
Kubonakala kimi ukuthi inqobo nje uma uNvidia enganqumi ukuxhasa ngokusemthethweni i-Optimus ku-Linux, noma uma ungenantshisekelo yokuba nabashayeli bezimpahla kodwa usebenzisa i-Nvidia GPU yakho, iBumblebee iyindlela enhle kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » UNvidia Optimus kukhompyutha yakho ephathekayo yeLinux efaka iBumblebee
Amazwana ayi-17, shiya okwakho
UGeorge Urbina kusho
Umsebenzi omuhle kakhulu, siyabonga ngokwabelana ngolwazi lwakho nokusisiza sithuthukise.
Phendula u-Diego Urbina
Ngiyabonga ngokusinda lapha.
I-athikili enhle kakhulu umngani 😉 futhi wamukelekile ebhodini: D. Sikufisela inhlanhla bhuti.
Ngiyabonga bhuti. 😉
Ijaji 8) kusho
Iqiniso ukuthi, ngisanda kuthenga ilaptop entsha. Bengifuna ukuthi ihluzo zibe yi-NVIDIA, ngoba kuwo wonke amakhompyutha engibe nawo, ibilokhu isebenza kahle kakhulu futhi nabashayeli abaphethe, isebenza kahle kwiLinux.
Ngamangala ukubona ubuchwepheshe obusha busebenzisa amaprosesa wehluzo ezi-2, kepha ngamangala kakhulu ukubona ukuthi ukuxhaswa kweLinux kwakungekuhle noma kungekho ukuxhaswa.
Ngakho-ke ngigxumele echibini futhi ngakhetha ihluzo ze-Intel futhi kuze kube manje ngijabule kakhulu.
Kuyiqiniso ukuthi eminye imidlalo ayibukeki ilungile (izinkinga ezincane kakhulu noma izimbungulu ezinkulu emidlalweni yakudala yokuphathelene). Kepha kukonke kubonakala kimi ukuthi kuyindlela evumelekile futhi enhle.
Amaprosesa we-Intel ihluzo lisekelwa yi-kernel, okusho ukuthi ungafaka i-Linux distro yakho futhi ube nokusheshisa kwe-3D ngaphandle kokwenza lutho. Izinto zokubhala, imidlalo, njll. asikho isidingo sokumisa noma ukuhlanganisa.
Ngaphezu kwalokho, lapho i-kernel ivuselelwa, nabashayeli abanobunikazi kuyadingeka ukuphinda baqoqe, nabakhululekile, konke kusebenza kahle ngoba abashayeli nabo bayabuyekezwa bebodwa.
Futhi ekugcineni, abashayeli bathuthukiswa ngenguqulo, ngakho-ke ngiyacabanga futhi ngiyethemba ukuthi ngokuzayo izimbungulu ezincane ezikhona namuhla zizoxazululwa.
Angifuni ukukhangisa uhlobo oluthile lomkhiqizo ngaphezu kolunye, kepha iqiniso lokuthi abantu base-Intel basiza ukwenza abashayeli bemikhiqizo yabo bakhululeke futhi neLinux ibe nokusekelwa okwamukelekayo kwehardware yabo kuyinto okufanele sicabange ngayo lapho siya thenga ikhompyutha entsha.
Naphezu kwezingqinamba, iqiniso lokuthi ngikwazi ukwesekwa nge-3D "ngaphandle kwebhokisi" ngeLinux liyangikhokhela.
Phendula kuJEsuSdA 8)
Uhlelo lwempilo kusho
Ingabe lokhu kuthinta amakhompyutha wedeskithophu?
I-Optimus itholakala kuphela kuma-laptops.
Sawubona, Moscosov. Ngiyabonga kakhulu ngale ndatshana. Uthinta udaba olubaluleke kakhulu, lolo lwama processor. Ngingathanda ukukubuza umbuzo. Bheka, ngilangazelela ukuthenga ikhompyutha yedeskithophu yokuhlela ividiyo nokwakhiwa kwezithombe ezinhlobonhlobo ngezinjongo zokufundisa, kusebenza nge-GNU / Linux, kunjalo. Ngingathanda ukuthi kube iprosesa ye-i7 entsha, okuyi-investimenti ezongihlala okungenani iminyaka emihlanu. Kepha angazi lutho ngamabhodi we-mama, noma izinkumbulo, nokuncane kakhulu ngama-processor. Ngabe ungenza i-athikili encoma into enjengale? Angifuni ukuthenga iprosesa ehamba phambili ukuze kuvele ukuthi abashayeli behluzo abakwazi ukukhombisa amandla abo aphelele ngoba abagijimi kuWindows. Siyabonga ngokunaka kwakho.
Futhi unamalini (ngamadola) uCarlos?
I-Intel ikulungele kakhulu abakushoyo kodwa-ke, uma uzoba nebhuthini elikabili elizodlala ku-hasefroch, ukusebenza kuyesabeka.
kuhle, ngiyakutshela ngine-linux mint 12 ne-asus k53sc, kimi lapho ngifuna ukungeza
$ sudo aptitude faka i-virtualgl-libs-ia32 ne-libgl1-nvidia-glx-ia32
Ayikwazanga ukuthola noma iyiphi iphakethe elinegama noma incazelo efana ne- "virtualgl-libs-ia32"
enye ifaka eyodwa.
Noma kunjalo, angiqondi kahle ukuthi ibumbleebe isebenza kanjani, ngibuza ukuthi kuyadingeka yini ukuthi kusebenze ibhodi le-nvidia ngaphambi kokufaka ibumblebe?
Incazelo enhle kakhulu ngeBumblebee. Ngizama ukukusebenzisa kuCentos 5.7. Ngabe unawo umqondo wokuthi ungakwenza kanjani ngendlela elula. Ngicabanga ukuthi ayikho ku-elrepo.org okwamanje.
umnikelo omuhle kakhulu. Ngibe ngemuva kwento enjengale isikhathi eside impela, yize benginethemba lokuyilayisha kusuka ekuqaleni ukuze ideskithophu isebenzise iNvidia.
Ngingazi kanjani ukuthi uhlelo lokusebenza lusebenzisa iNvidia. Ngisho lokhu, ngokwesibonelo, ukwenza umdlalo ngewayini newayini ukulilayisha nge-optirun.
Angazi noma ngizichaza kahle yini.
Ngiyabonga kakhulu ngombhalo.
ngibona kakhulu…. Akusebenzi isikhathi eside uzama ukufaka abashayeli bakudala noma abakhululekile, akukho okusebenzayo kepha lokhu ... kusebenzile ... umuhle ... !!
Ukuhlola .. Ngiyabonga .. !!! .. umbuzo, okuwukuphela kwendlela yokuvula izinhlelo zokusebenza usebenzisa uNvidia lapho-ke kuzovela kukhonsoli ?? .. Sanibonani
Impela, noma ukudala iskripthi sokuncenga i-optirun njalo lapho ufuna ukusebenzisa ikhadi le-Nvidia. Isanikeza ukusebenza okuhle kakhulu kwehluzo, futhi ngiyisebenzisa kakhulu ukudlala iMinecraft nomdlalo ongajwayelekile oyidingayo
Uxolo ngokungazi kepha kungasebenza ne-nvidia yami?, Ukwenza i-lspci ngithola lokhu:
04: 00.0 Isilawuli se-3D: I-NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev a1)
Funda ukusebenzisa i-GIMP igxathu negxathu nge-AdaptableGIMP
Faka iCinnamon ku-Debian Sid